Ingozi Njani IArazine?
I-Atrazine exposure ineempembelelo zempilo kakhulu kwizilwanyana nabantu
I-Atrazine yi-herbicide yezolimo esetyenziswa ngokubanzi ngamafama ukulawula ukhula olubanzi kunye neengca eziphazamisa ukukhula kwengqolowa, i-sorghum, isityalo sobushukela nezinye izityalo. I-Atrazine isetyenziselwa nje ngokuba ngumbulali wokhula kwiiklasi zegalufa kunye neentlobo ezahlukeneyo zokurhweba kunye neendawo zokuhlala.
I-Atrazine, eyenziwa yi-Swiss agrochemical inkampani yaseSyenta, yabhalwa ngokutsha e-United States ngo-1959.
I-Herbicide ivinjelwe kwi-European Union ukususela ngo-2004-amazwe ngamazwe aseYurophu avalwe iArazine njengama-1991-kodwa iipounds ezili-80 zezixhobo zisebenziswa minyaka yonke eUnited States - ngoku i-second use herbicide e-US emva kwe-glyphosate (Roundup).
I-Atrazine isongela ama-Amphibians
I-Atrazine inokukhusela izityalo kunye neengqungquthela kwiintlobo ezithile zokhula, kodwa ingxaki yendalo kwezinye iintlobo. Ikhemikhali yinto ephazamisayo ye-endocrine eyenza i-immunosuppression, i-hermaphroditism ize ibuyele ngokupheleleyo kwizesondo zamadoda kwiingxube eziphantsi kwe-2.5 izingxenye zeebhiliyoni (ppb) -ngaphantsi kwe-3.0 ppb ukuba i-US Environmental Protection Agency (EPA) ithi ikhuselekile .
Le ngxaki ibaluleke kakhulu, kuba abantu be-amphibian emhlabeni wonke baye bahlaselwa ngamaxabiso angakaze afikeleleke, namhlanje, malunga nesithathu kwezilwanyana zezilwanyana zehlabathi ezixhaswa yi-amphibian (ezisemgangathweni ngenxa yefyutrid fungus).
Ukongezelela, i-atrazine iye yadibaniswa nokukhubazeka kokuzala kwintlanzi kunye ne-prostate kunye nomhlaza wesifuba kwiingcongolo zebhoratri. Izifundo ze-epidemiological zibonisa ukuba i-atrazine yingozi ye-carcinogen kwaye ikhokelela kwiminye yempilo yemicimbi.
I-Atrazine yinkinga yokuLwela kweMpilo yabantu
Abaphandi bafumana inani elinyukayo lezonxibelelwano phakathi kwe-atrazine kunye neziphumo ezizalwayo ezingabonakali kubantu.
Uvavanyo olwenziwa ngo-2009, umzekelo, lufumene ukulungelelaniswa okukhulu phakathi kokusasazeka kwe-atrazine (ikakhulukazi ukusuka kumanzi okusela aphethwe ngabasetyhini abakhulelweyo) kunye nokuncipha komzimba kwiintsana. Isisindo sokuzalwa esincinci sinxulumene nobungozi obuninzi bokugula kwiintsana kunye neemeko ezifana nesifo senhliziyo nesifo sikashukela.
Ingxaki yempilo yoluntu yinkxalabo ekhulayo, kuba i-atrazine yinto ebonakalayo kakhulu kwi-pesticide emanzini angaphantsi eMelika. Ucwaningo olubanzi lwe-US Geological Survey lufumene i-atrazine malunga namaphesenti angama-75 emanzini okuhambisa amanzi kunye namaphesenti angama-40 eesampuli zamanzi aphantsi komhlaba kwiindawo zokulima ezivavanywayo. Idatha yakutshanje ibonisa i-atrazine ekhoyo kuma-80 ekhulwini eesampuli zamanzi atywala athathwe kwiinkqubo zamanzi karhulumente ezi-153.
I-Atrazine ayikho nje ngokubanzi ekhoyo kwimeko, iyakwazi ukuphikelela ngokungaqhelekanga. Kwiminyaka elishumi elinesihlanu emva kokuba uFransi ayeke ukusebenzisa i-atrazine, i-chemicals isenokufunyanwa khona. Unyaka ngamnye, ngaphezu kwesigamu sezigidigidi ze-atrazine zihamba ngexesha lokutshiza kwaye zibuyele eMhlabeni emvula naseqhweni, ekugqibeleni zihlala emifuleni nasemanzini angaphantsi komhlaba kunye negalelo lokungcola kwamanzi ngamachiza.
I-EPA ibhalise i-atrazine ngo-2006 kwaye ibona ikhuselekile, ithi akukho nto ingabangela impilo yabantu.
I-NRDC kunye neminye imibutho engqongileyo ibuza loo mpendulo, ibonisa ukuba iinkqubo ezingaphelelanga zokubeka iliso kwi-EPA kunye nemimiselo ebuthakathaka baye bavumela amazinga e-atrazine kumanzi amaninzi kunye namanzi okusela ukufikelela kwiindawo eziphezulu kakhulu, ngokuqinisekileyo ubeka impilo yoluntu ngokubhekiselele kuyo kwaye mhlawumbi ingozi enkulu.
NgoJuni ka-2016 i-EPA yakhupha uvavanyo lwezemvelo lwama-atrazine, olwalujonga imiphumo emibi ye-pesticide kwimimandla yamanzi, kubandakanywa isityalo, intlanzi, i-amphibian, kunye ne-invertebrate populations. Iinkxalabo ezongezelelweyo zandisa uluntu lwendalo. Ezi ziphumo zichaphazela imboni yezilwanyana zepilisi, kunjalo, kodwa namafama amaninzi athembele kwi-atrazine ukulawula ukhula olunzima.
Amafama amaninzi afana neAtrazine
Kulula ukubona ukuba kutheni amafama amaninzi afana neAtrazine.
Ixabiso elincinci, alilimazi izityalo, liyakwandisa izivuno, kwaye libagcina imali. Ngokomnye uphando, abalimi abakhulayo ingqolowa kunye nokusebenzisa i-Atrazine ngaphezu kweminyaka engama-20 (1986-2005) babone isivuno esiphezulu se-5.7 zebhasi ngaphezulu kwehektare, ukwanda kwama-5 ekhulwini.
Uphononongo olufanayo lufumene ukuba iAtrazine iindleko eziphantsi kunye nezityalo eziphezulu zongezelelwa ngama-25.74 ngama-acre kwintlawulo yamafama ngo-2005, eyongezelela kwinzuzo epheleleyo kumafama ase-US eyi-1.39 billion. Uphononongo oluthile lwe-EPA lucinga ukuba inzuzo eyongeziweyo yabalimi kwi-28 engamahektare nganye, ngenzuzo engama-$ 1.5 billion ukuya kumafama ase-US.
Ukuvalwa kwe-Atrazine akuyi kuba buhlungu abalimi
Ngakolunye uhlangothi, isifundo seSebe lezoLimo lase-United States (USDA) lisikisela ukuba ukuba i-atrazine ivinjelwe e-United States, ukukhupha isivuno sembewu kuya kuba malunga ne-1,19 pesenti, kwaye i-corn acreage iya kuncitshiswa ngamaphesenti angama-2.35 kuphela. . UDkt. Frank Ackerman, i-Economist kwiYunivesithi yaseTufts, waphetha ukuba ukuqikelela kwelahleko eziphezulu ezikhungweni ngenxa yeengxaki zendlela. U-Ackerman wafumanisa ukuba nangona u-1991 uvinjelwe i-atrazine kwiItali naseJamani, akukho ilizwe eliye labhalwa nemiphumo ebalulekileyo yezoqoqosho.
Kwingxelo yakhe, u-Ackerman wabhala khona "akukho mqondiso wezivuno eziwela eJamani okanye e-Italy emva ko-1991, ngokubhekiselele kwisivuno se-US-njengoko kwakuya kwenzeka ukuba i-atrazine ibalulekile. Ngaphandle kokubonisa ukuphazamiseka emva kwe-1991, bobabini base-Italy kunye (ngokukodwa) isiJamani sibonisa ukukhula ngokukhawuleza kwiindawo ezivunwa emva kokuvinjelwa i-atrazine kunaphambili. "
Ngokusekelwe kuloluhlalutyo, u-Ackerman waphetha ukuba ukuba "impembelelo yezivuno ingumyalelo we-1%, njengoko i-USDA iqikelelwa, okanye isondele kwi-zero, njengoko kucetyiswa ubungqina obutsha obuxutyushwa apha, ngoko imiphumo yezoqoqosho [yokukhupha i-atrazine] ncinane. "
Ngakolunye uhlangothi, iindleko zoqoqosho zokuqhubeka nokusebenzisa i-atrazine-zombini kwiinkonzo zamanzi kunye neendleko zentlalo-ingaba yinto ebalulekileyo xa kuthelekiswa nokulahlekelwa koqoqosho oluncinci lokuvalwa kwemichiza.
Iingcebiso ezibalulekileyo zokuya kwii-MBA Fairs
Ngaba Uyazi ukuba i-US ixolise kubantu baseMelika?
Abadumileyo abaye kwiSikole sabucala
Emva kweMinic obulalayo yaseMunich